Ngaba iiBrand kufuneka zithathe indawo kwimiba yoLuntu? | Martech Zone
Ngale ntsasa, andilulandelanga uphawu kuFacebook. Kunyaka ophelileyo, uhlaziyo lwabo luye lwahlaselwa kuhlaselo lwezopolitiko, kwaye andisafuni ukubona ukungakhathalelwa kokutya kwam. Kangangeminyaka eliqela, ndandivakalisa izimvo zam kwezopolitiko. naye. Ndijonge njengokuba oku kulandelayo kuguqulwa kwaba ngabantu abaninzi abavumelana nam ngelixa abanye abangavumiyo bengalandeli kwaye belahlekelwe kukunxibelelana nam.
Ndizibonele iinkampani endandithandana nazo zisuka ekusebenzeni nam, ngelixa ezinye iimveliso zandisa ukubandakanyeka kwazo nam. Ukwazi oku, unokumangaliswa kukwazi ukuba nditshintshe indlela endicinga ngayo nesicwangciso sam. Uninzi lwentsebenzo yam epapashiweyo yoluntu ngoku iyakhuthaza kwaye inxulumene nomzi-mveliso endaweni yentlalo nezopolitiko. Ngoba? Ewe, ngenxa yezizathu ezimbalwa:
Ndiyabahlonipha abo banezinye iimbono kwaye andifuni ukuzityhalela kude.
Iinkolelo zam azichaphazeli indlela endibaphatha ngayo abo ndibakhonzayo… kutheni ke ngoko ivumela ukuba ichaphazele ishishini lam?
Akusombululanga nto ngaphandle kokukhulisa izikhewu kunokuba uzivale.
Ukungavisisani okuhloniphekileyo kwimicimbi yezentlalo kufile kwimidiya yoluntu. Amabhanti ngoku ahlaselwa ngokumasikizi kwaye ahlaselwe xa kukho nasiphi na isimo esivelisiweyo okanye esibonwa luluntu. Phantse naluphi na ukhuselo okanye ingxoxo ekhawulezayo iyazika kuthelekiso lwenyikima okanye kolunye ubizo. Kodwa ndiyaphazama? Olu datha lubonisa ukuqonda ukuba abathengi abaninzi abavumelani kwaye bakholelwa ukuba iimveliso ezininzi kufuneka zichanekile kwaye zithathe esidlangalaleni imicimbi yezentlalo.
I-Havas Paris / Paris yeVenkile yeVenkile yokuThengisa yafumanisa izinto ezintathu ezazibonakala ekutshintsheni ubudlelwane phakathi kweemveliso kunye nabathengi baseFrance:
Abathengi bakholelwa ukuba ngoku i uxanduva lophawu ukuthatha indawo kwimiba yoluntu.
Abathengi bafuna ukuba njalo uvuzwe ngokobuqu ziimpawu abasebenza nazo.
Abathengi bafuna iimveliso ezifumanekayo zombini kwi-intanethi nakwi-intanethi.
Mhlawumbi uluvo lwam lwahlukile kuba ndikufutshane namashumi amahlanu. Kubonakala kum ukuba kukho ukungqubana kwidatha apho isinye kwisithathu sabathengi sifuna ukuba iimveliso zifumane ezopolitiko ngaphandle kwayo yonke imicimbi yezentlalo eguqukayo ibe ngumdlalo webhola. Andiqinisekanga kangako ukuba ndifuna ukukhusela i-brand evakalisa ngokuphandle imeko yayo kwimicimbi yezentlalo. Kwaye kuthiwani malunga nembambano yentlalo eyahlulahlula isiseko sabathengi? Ndicinga ukuba ingxelo yokuqala inokufuna ukuba iphinde ibhalwe:
Abathengi bakholelwa ukuba ngoku luxanduva lwegama ukuba bathathe inxaxheba kwimicimbi yezentlalo… okoko nje uphawu lwentengiso luvumelana nomthengi ngendlela yokuphucula uluntu.
Andinangxaki kuyo nayiphi na inkampani exhasa ngasese imiba yezentlalo, kodwa andinakukwazi ukuzibuza ukuba ngaba ukunyanzelwa kweempawu ukuthatha isikhundla kuzakusetyenziselwa ukubavuza okanye ukohlwaya ngokwezoqoqosho ngenxa yeembono zabo. Uninzi lwemiba yezentlalo ixhomekeke, hayi injongo. Oku akubonakali ngathi yinkqubela kum - kubonakala ngathi kukuxhaphaza. Andifuni kunyanzelwa ngabaxumi bam ukuba bathathe ukuma, baqeshe abo bavumelana nam kuphela, kwaye ndikhonze kuphela abo bacinga ngokufanayo nam.
Ndiyayixabisa iyantlukwano yezimvo endaweni yokucinga ngokwamaqela. Ndiyakholelwa ukuba amathemba, abathengi, kunye nabathengi basafuna kwaye badinga ukubanjwa ngumntu kunokuba basebenzise izinto ezizenzekelayo, kwaye bafuna ukuvuzwa ngokwabo kunye nokwamkelwa zezo ntengiso bachitha imali yabo abayisebenzele nzima.
Ke, ngaba ukuthatha kwam imeko kule mpikiswano?
Isifundo soBonisi beShopper, Phakathi kwe-AI kunye nezopolitiko, ukubaluleka kwento yabantu kubathengi, yenziwa yiVeki yokuThengisa yaseParis ngokubambisana neHavas Paris.
tags: uhloboUkufaka uphawuIHavas eParisukuthengisa ngaphandle kweintanethiIVeki yokuThengisa yeVenkile yeParisipolitikiIvenkileiivenkile ezithengisa izinto zempahlaabathengisiumvuzoimiba yezentlaloukuma kwezentlalo
Meyi 25, 2017 kwi-2: 08 PM
Njengesiqhelo. Amanqaku amahle. Ndiyavuma, kunye nengxelo yakho eguqulweyo yokuba umthengi ufuna ntoni. Ndiyakholelwa ukuba iimveliso ezingakumbi ziya kohlwaywa esidlangalaleni ngenxa yeemeko zabo, kodwa iidola zinokubaxhasa ngenkxaso yabathengi abongezelelweyo abavumelana nabo ngasese.
Meyi 30, 2017 kwi-12: 09 PM
Iingxelo ezimbini eziphambili ezivela kwinqaku lakho ezishwankathela into endiyicingayo ngalo mbandela, "Uninzi lwemicimbi yezentlalo ixhomekeke, ayisiyonjongo" kwaye "Ndiyayixabisa iyantlukwano yezimvo endaweni yeqela lokucinga". Ndicinga ukuba uninzi lwabo bahluthwe kangaka abaqondi ukuba uluvo lwabo luyilo kanye, uluvo, kwaye abanakho okanye abayi kumamela ezinye izimvo ukwandisa ububanzi babo. Ndivuma ngokupheleleyo ukuba akukho nkampani kufuneka ityhale esidlangalaleni ukuma kwayo kule micimbi, okanye ngokuqinisekileyo baya kujongana nokubuyela umva nangayiphi na indlela. Njengenkampani ndingatsho ukuba ndinabasebenzi abanezimvo nezimo ezingafaniyo kwaye ndimi emva kwenkululeko yokucinga kunye nenkxaso kubasebenzi kuyo yonke imimandla yezopolitiko.